Bloglọ ọrụ na-ede blọgụ site na ọdachi (ka ọ na-apụta) | Martech Zone
Wenezde, August 2, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Ọrụ nnabata Monster, Dreamhost, na-ebi ndụ abalị SaaS ugbu a. Ọ dị ka dominoes nke ọdachi niile kpebiri ịkwado n'usoro ihe omume na-aga n'ihu maka ha. Mgbe m rụrụ ọrụ dị ka onye nlekọta ndozi n’otu nnukwu akwụkwọ akụkọ, agwara m ndị mmadụ na enwere ọtụtụ ihe nwere ike agahie n’etiti inweta ibe peeji ahụ na itinye akwụkwọ ahụ n’okporo ámá. Ọrụ m bụ ijikwa ihe egwu ahụ site na ịwakpo ebe ọ bụla adịghị ike na sistemụ. Ma, mgbe ụfọdụ, anyị anaghị ejide ihe ndị ahụ aka. Dreamhost na-achọta nke a ugbu a… ma ha na-arụsi ọrụ ike na-ekwurịta banyere ọdachi ahụ site na ha ụlọ ọrụ blog (kpuchie)
M na-aja Dreamhost maka oge ha na eziokwu ha mechie. Adịghị m onye ahịa (ana m anabata ya Awụlikwa elu), ma nwee nkwanye ùgwù ọhụrụ maka ha mgbe ị gụsịrị banyere 'ọdachi na-aga n'ihu'.
Seth Godin dere, sị:
Ihe omumu nke mbu: mgbe ihe mebiri, ido uzo, ikwugide onwe ya na igba mgbaghara bu nani uzo iji mesoo ndi ahia ma oburu n’atu anya ka ha nye gi ohere ozo.
Ihe nkuzi nke abuo: akuko gi n’ile enweta. Ọ bụrụ na ị na-ere "elu-oge" akụkọ, mma n'elu-etinye ego na ihe ọ bụla ọ na-ewe iji jide n'aka na akụkọ gị bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ị na-ere yogọt organic, kwụọ ụgwọ karịa ihe ịchọrọ iji gbochie nsị ndị ahụ.
Ihe omumu nke ato: oburu na ichoro na mgbe ufodu na abia iri na abia abia, enwere ike kari (no brownouts na New York, gas di ala na Ohio na otutu ike maka wijetị ohuru gi ebe obula) ezighi ezi nzọ.
Aga m etinye ihe ole na ole na nkuzi nke otu:
Enyere m ihe na-esonụ na blog Dreamhost (buru ụzọ gụọ ya):
Feedbackfọdụ nzaghachi maka '' oflọ Ọrụ nke âlọ ''. Inye ọtụtụ nkọwa gbasara akụrụngwa ọdịda na-enye ndị ahịa ọchịchọ ịmata nke ọtụtụ ihe ga-emebi. Site n'inye nkọwa zuru oke banyere ọpụpụ, mana enweghị ozi ma ọ bụ ozi ịkpọtụrụ (naanị ịbanye '' Office of the Building '???) enweghị obi eziokwu ma gosipụta na ịchọghị isoro onye ahịa gị nsogbu ahụ. Nke ahụ na-agbagha.
Companylọ ọrụ m nwere ọrụ ogologo afọ gara aga nke mere ka anyị nweta ọtụtụ narị puku dollar na mmeghari ohuru. Agbanyeghị, ọ ga-efu anyị ọtụtụ nde dollar ma ọ bụrụ na anyị akpọghị ndị ọrụ, wepụta ibe ịkpọtụrụ ọzọ (peeji ntinye aka na nọmba ekwentị ebe anyị nwere ike ịbịakwute ndị ahịa anyị) wee kpọtụrụ onye ọ bụla na ndị ahịa ọ bụla mmetụta.
Izo n'azụ mbinye aka na-enweghị isi dị egwu. Agaghị m anagide nke a.